မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ရပ်ဝန်းများ အခြေခံ ကောင်းမှ မေ့မေ့ဆန္ဒ ပြည့်ဝ နိုင်မည်။ - News @ M-Media
in ဆောင်းပါး — December 10, 2018
နိုင်ငံတစ်ခု တည်ငြိမ်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန် နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းများ (Positive Political Ambience) ဖန်တီး ပြင်ဆင် ထားဖို့လိုသည်ဟု ပညာရှင်များက တညီတညွတ်တည်း ဆိုကြ၏။ ဒါဆိုရင် လက်ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဝန်းကျင်ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၁။ နိုင်ငံသားတို့ ပိုင်ဆိုင်သော အာဏာနှင့် ဥစ္စာပစ္စည်းများကို အဓမ္မ သိမ်းယူခြင်းဖြင့် စတင် သန္တေတည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းခေါင်းဆောင်သော စစ်ကောင်စီမှ ပြည်သူတို့ ပိုင်ဆိုင်သော နိုင်ငံတော် အာဏာ အရပ်ရပ် (ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး) ကို စစ်အာဏာ သိမ်းခြင်းဖြင့် အခြေခံ ရပ်ဝန်းကောင်း တစ်ခုမှ စတင် ထွက်ခွာ သွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြား ကုမ္မဏီကြီးများကို လျှော်ကြေးပေးသော်လည်း နိုင်ငံသား ပြည်သူတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ငယ်လေးများကို လုံးဝလျော်ကြေး မပေးသည့် အပြင် နိုင်ငံတော်မှ အသိ အမှတ်ပြု မော်ကွန်းဝင် လက်မှတ် လေး တစ်ခု တောင် မပေးဘဲ ပြည်သူပိုင် သိမ်း သည် ဟူ၍ အမည်လှလှ ပေးပြီး နိုင်ငံသားများ ပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်ခန်းနှင့် ပစ္စည်းများကို အဓမ္မ သိမ်းယူသွားကြသည်။
အဓမ္မ ပြည်သူပိုင် သိမ်းခြင်း ရပ်ဝန်း၏ အကျိူးဆက်များကို ကြည့်သော် ….
(က) တိုင်းပြည်၏ ကုန်လုပ် အရင်းအနှီးများ ဖြစ်သော စက်ရုံ အလုပ်ရုံများသည် ပြည်သူပိုင်သိမ်း အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲပုံ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် တစတစ ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြရသည်။ အဓမ္မ ဓားပြ တိုက်သည့် သဏ္ဌန်ဖြင့် ပြည်သူ ပိုင် သိမ်းယူရာတွင် ကုန်လုပ် အရင်းအနှီး (Hardware) ဖြစ်သော စက်ရုံ များသာ ရရှိသွားပြီး လုပ်ငန်း လည် ပတ်ရာတွင် အရေးပါသည့် ကုန်လုပ် ဆက်ဆံရေး (software) ဖြစ်သော စီမံ ခန့်ခွဲမှု ပညာ မပါသွားသည့် အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံး ဆုံးရှုံး ကုန်ခဲ့ ကြသောကြောင့် တိုင်းပြည်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု (Asset) များ ပြိုကွဲကာ ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး နှစ်ပေါင်း အစိတ် အကြာတွင် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ် ဦးနေဝင်း ကိုယ်တိုင် ကြေငြာ ခဲ့ရလေသည်။
(ခ) ပြည်သူပိုင် အသိမ်းခံရသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံနေကြသည့် လုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိတို့၏ အတွင်းပစ္စည်းများနှင့် စုဆောင်းထားသော ငွေကြေးများကို မှောင်ခို လမ်းကြောင်းများမှ တဆင့် သော်၎င်း၊ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးများမှ တဆင့်သော်၎င်း တိုင်းပြည်ပြင်ပသို့ ထုတ်ယူ သွားကြသော အခါ ဒုတိယ အကြိမ် (Asset) များ ပြိုကွဲကာ တိုင်းပြည်တွင် အခွံသာ ကျန်ပါတော့သည်။
(ဂ) သို့သော် ပြည်သူပိုင်သိမ်း အစိုးရ အနေဖြင့် အမြင်မှန် မရဘဲ နိုင်ငံခြားသို့ စွန့်ခွာသွားသူများ စွန့်လွှတ် ခဲ့ကြသော အိမ်ခန်းများ ကို သော့တက်ခတ်ပြီး အိုးအိမ်ခန်းအဖြစ် ကြေငြာကာ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကို နေရာ ချထားပေးလေသည်။ ထိုဝန်ထမ်းများ ပင်စင်ယူသော အခါ ထို အိုးအိမ် တိုက်ခန်းများကို ရောင်းချ သွားခဲ့ ကြလေသည်။ အလကားရ၍ မြတ်သည်ဟုထင်သော သိမ်းယူထားသည့် မြေယာနှင့် အဆောက် အအုံ တချို့ကို ယခု အခါ မူလ ပိုင်ရှင်သို့ ပြန်လည် ပေးအပ်နေကြရ၏။ မြေယာများ သိမ်းယူစဉ်က ဥပဒေနှင့် အညီ မသိမ်း ခဲ့လေတော့ ပြန်လည် စွန့်လွတ်သောအခါ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားစရာများ ဖြစ်ပေါ်နေလေသည်။
(ဃ) တိုင်းပြည် ပြာပုံ ဘဝရောက်မှ မှားမှန်းသိသော Policy Makers တို့သည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ (၃၅၆) တွင် နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံသားများ၏ တရားဝင် ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ မရွှေ`့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင် စပ်လျင်း၍ ဥပဒေ အရ ကာကွယ်ပေးရမည် ဟု ထည့်သွင်း ရေးသား လာကြသော်လည်း သူတစ်ပါး၏ ဥစ္စာ ပစ္စည်းများကို အတင်း အဓမ္မ လုယူ၊ ဖျက်ဆီးတတ်သည့် ရပ်ဝန်းက တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်နှင့် နယ်စပ် ဒေသများတွင် ယခုတိုင် အားကောင်းနေ ပြန်သည်။
၂။ တဖက်စောင်းနင်း ဥပဒေ ရေးစွဲ ပြုစုသည့် ရပ်ဝန်း စတင် ဖြစ်တည်လာခြင်း။
ထိုသူတို့သည် ဥပဒေမဲ့ ပြည်သူပိုင် သိမ်းပြီးနောက် ဥပဒေနှင့် အနိုင်ကျင့်လျှင် တရားမျှတ သည်ဟု ယူဆ လာကြပြန်သည်။ ထိုအခါ ဥပဒေပြုရာတွင် လိုက်နာ စံပြုရမည့် တရားမျှတမှု ဘောင်ကို ကျော်၍ အိမ်ပိုင်ရှင်ကို ဖိနှိပ်ပြီး အိမ်ငှားကို အသာစီး ပေးထားသော အိမ်ရှင် အိမ်ငှား ဥပဒေကို တဖက်သတ် ပြဌာန်း လိုက်သောကြောင့် အိမ်ငှားများမှ အိမ်ကို ဖယ်မပေးဘဲ အပိုင်စီးယူမှုများ ယနေ့တိုင် ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
အိမ်ငှား၏ အကျိုး အတွက် ဘက်လိုက် ပြဌာန်းထားသော တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့သည့် တည်ဆဲ အိမ်ရှင် အိမ်ငှား ဥပဒေ၏ အကျိုးဆက်ကို ကြည့်သော်…
(က) မြန်မာနိုင်ငံမှ ချမ်းသာ သူတို့သည် မြန်မာပြည်တွင် အိမ်ခန်း မဝယ်ရဲတော့ဘဲ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေး၊ ဒူဘိုင်း၊ ဟောင်ကောင်၊ တရုတ်နှင့် ဥရောပ တိုင်းပြည်များတွင် လူနေ အိမ်ခန်းများ ဝယ်၍ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ကြလေသည်။
(ခ) အခန်းပိုင်ရှင် အနေဖြင့် မိမိပိုင် အခန်းကို လက်လွတ်ရှုံးမှုမှ ကာကွယ်ရန် အတွက် နှစ်ချုပ်နှင့် အခန်း ငှားသော ဓလေ့ ပေါ်ပေါက် လာသောကြောင့်လည်း အိမ်ငှားများ ပိုမို အခက် အခဲ တွေ့ကြ ရလေသည်။
၃။ တဆင့်တက်၍ လူ့အခွင့်အရေး စံချိန် စံညွှန်းများနှင့် မကိုက်ညီသော ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေကို ရေးစွဲပြဌာန်း။
လူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိပါးလို့ ရသော အခါ ပြည်သူတို့၏ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုကို ဆက်လက် ထိပါး လာသည် အထိ အတင့်ရဲ လာကြလေသည်။ ပင်မ ဥပဒေတွင် အပြစ်လွတ်အောင်ရေးပြီး ဌာနတွင်း ညွှန်ကြား ချက်များဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံ၏။ နိုင်ငံသားတို့ အကြား သွေးနှော တံဆိပ် ကပ်ပြီး မိမိ အဖေနှင့် အမေကို ရွေး ချယ် ခွင့် မရသော ကပြား ကလေး ငယ်များအား ခွဲခြားဆက်ဆံသောကြောင့် တိုင်းရင်းသူ၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် နိုင်ငံသား မိဘ တို့မှ မြန်မာ့ မြေပေါ်တွင် မွေးဖွားသော ကပြား ကလေးများမှာ ဧည့်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကုန်၏။
တည်ဆဲ နိုင်ငံတကာ စံနှင့် မညီသော ၁၉၈၂ ဥပဒေ၏ အကျိုးဆက်ကို ကြည့်သော် ….
(၁) မြန်မာ ကပြားများ နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်၍ ပညာသင်ကြ၊ အလုပ် လုပ်ကြသောကြောင့် တိုင်းပြည်အတွက် လူ သား အရင်း အမြစ် ဆုံးရှုံး၏။ ဤအခြေ အနေကို သိသော မလေးရှားက My Second Home Visa ပေးပြီး လူ သား အရင်း အမြစ်နှင့် ငွေသား ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုကို စုဆောင်း၏။ မြန်မာပြည်မှ ဦးနှောက်နှင့် အရင်း အနှီးများ ယိုစီး ထွက်ကုန်၏။
(၂) ၁၉၈၂ မှတွက်သော် ၃၆ နှစ်ကြာသည့်တိုင် နိုင်ငံသား စိစစ်လို့ မပြီးနိုင်သောကြောင့် ရခိုင်တွင် ကမ္ဘာကျော် ရိုဟင်ဂျာ Ethnic Cleansing ပြဿနာ ဖြစ်နေ၏။ ICC သို့ပင် အမှု ရောက်နေပြီ ဖြစ်၏။
၄။ ပုတ်သင်ညို အမတ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဥပဒေပြု လွှတ်တော်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ။
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိန်လွင်က ပြည်သူများ သုံးစွဲနေသော ငွေကြေး များကို တရားမဝင် ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေငြာပြီးနောက် ထိုခေတ် (မ. ဆ. လ) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီ လွှတ်တော်က ထိုကြေငြာချက်ကို မဆိုင်းမတွ အတည်ပြုပေးခဲ့၏။
ငွေဖျက်သိမ်းမှုကြောင့် နစ်နာသော ပြည်သူများ အုံကြွဖို့ တာစူလာသောအခါ ငွေကြေးဖျက် သိမ်းမှု ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့သည့် လွှတ်တော်၌ ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့သော ထန်းတပင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကပင် ငွေကြေး ဖျက်သိမ်းမှုသည် ပြည်သူ လူထုကို နစ်နာစေကြောင်း အဆိုတင်သွင်း ခဲ့လေသည်။
အကျိုးဆက်က နယ်စပ်များတွင် မြန်မာငွေကို ယုံကြည်မှု မရှိတော့ဘဲ ငွေကြေး လဲလှယ် ရာတွင် တန်ဖိုးကျ သွားပါတော့သည်။ နယ်စပ်မှသွင်းသော ကုန်ပစ္စည်းမှန် သမျှ ဈေးတက် သွားပါသည်။
ထိုသို့ နောက်ဆက်တွဲ ကုန်ဈေးနှုံး တက်သည့် ပြဿနာများကို ပြည်သူတို့ အလုးအလဲ ခံရပြီးနောက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ ၃၆ ပုဒ်မခွဲ (င) တွင် တရားဝင် ထုတ်ဝေထားသော ငွေကြေးကို တရားမဝင် ငွေကြေး အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မပြုရ ဟူ၍ နိုင်ငံတော် အခြေခံမူများတွင် ထည့်သွင်းရေးသား လိုက်ရပါတော့သည်။
ပုတ်သင်ညိုများ တက်သော လွှတ်တော်မှ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ ရလဒ်က မြန်မာငွေကြေးကို ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့သွား သောကြောင့် နိုင်ငံခြား ငွေနှင့်ယှဉ်တိုင်း တန်ဖိုး အမြဲ ကျနေလေ့ ရှိ၏။
၅။ ယုန်ထောင်ကြောင်မိ ဥပဒေ ပြဌာန်းပေးသည့် လွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း။
နိုင်ငံသားများ၏ အသက် အိုးအိမ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဥပဒေနှင့် အညီ အကာ အကွယ် မပေးနိုင်သည့် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ စံနှုန်း၊ လူ့ အခွင့် အရေး စံနှုန်း များနှင့် မကိုက်ညီသော ဥပဒေများကို တင်သွင်း အတည်ပြုပေးသည့် လွှတ်တော် ရပ်ဝန်းတွင် မျိုးချစ် အမည်ခံ မျက်ကန်း နိူင်ငံရေး သမားတို့ ပေါ်ထွက်လာ၏။
အမိန့်ရ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တို့က တစ်လင် တစ်မယား မျိုးချစ်ဥပဒေကို ပြဌာန်းရန် ဆော်သြ ဆန္ဒပြကြ၏။ ဥပဒေ တစ်ခု ရေးစွဲရာတွင် လိုက်နာအပ်သော ဥပဒေ စံနှုန်းများကို မသိသော ဥပဒေ ပညာရှင်များက ထိုဥပဒေ ကို ရေးဆွဲ ပေးကြ၏။ လူ့ အခွင့်အရေး စံနှုံး၊ ဥပဒေ စံနှုန်း များနှင့်် တည်စဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေတို့ကို မသိသော လွှတ်တော် အမတ်များက ထို ဥပဒေ ကို အတည်ပြုပေး ကြကုန်၏၊
လူ့ အဖွဲ့ အစည်း တစ်ခုကို နှိပ်ကွပ်ရန် ရည်ရွယ်သော ဥပဒေမျိုးကို မရေးစွဲသင့်ကြောင်း အရပ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းများက ကန့်ကွက်သည့်ကြားက မျိုးချစ် ဥပဒေ ပြုသူများက မျိုးချစ် ဥပဒေသည် မည်သည့် လူ့ အ ဖွဲ့ အစည်း ကိုမျှ မရည်ရွယ် ပါဟု ငြင်းဆိုကာ လွှတ်တော် အမတ် ဦးအောင်ကို (ယခု သာ/ယဉ် ဝန်ကြီး) တို့ ပါဝင်သော လွှတ်တော်က အတည် ပြုခဲ့ကြပြီး သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က လက်မှတ်ထိုး ပြဌာန်း ပေးလိုက်သည်။
ထိုဥပဒေဖြင့် အရေးယူ ခံရသော ဘာသာခြား တစ်ဦးမှ မရှိသည့် အခါ ထိုမျိုးချစ် ဥပဒေကို ယုန်ထောင် ကြောင်မိ ဥပဒေဟု သုံးနှုံးသည်ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ယုန်ဖမ်းရန် ရည်ရွယ်သော ဥပဒေ ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင် လာ၏။ ကိုယ့်ရှုး ကိုယ်ပတ် ချိန်တွင် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ ကန့်ကွက် နေ သည့် ကြားက မရ မက အတည် ပြုခဲ့ကြသော ထိုမျိုးချစ် ဥပဒေ ဆိုတာ ကြီးကို ပြန်ပြင် ဦးမည်ဟု သာ/ယဉ် ဝန် ကြီး ဦးအောင်ကိုက ဆိုပြန်၏၊ မြင်သာအောင် ပြောရလျှင် ယုန်ထောင် ကြောင်မိ ဥပဒေကို ယုန်ထောင် ယုန်မိ ဥပဒေ ဖြစ်အောင် လည်း ပြင်ဆင်ရေးစွဲရန် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းက ခွင့်မပြုပါ။
ထို့ပြင်တဝ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ (၃၆၂၊ ၃၆၃) တို့ အရ နိုင်ငံတော်က အသိ အမှတ်ပြုထားသော ဘာသာများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် တာဝန် ရှိသည့် သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဆိုသူက ဘာသာ ပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးကို စိတ်ထဲ ပါလို့လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရန်မှ ကင်းဝေးရန်သာ ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား ပြောပြန်၏။
ထိုသို့ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေစံ၊ လူ့ အခွင့် အရေး စံနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတို့ကို အလေးမထားသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်မျိုးသည် တရားမျှတမှု မရှိသော ဥပဒေများကို ဆက်လက် ပြဌာန်းပြီး တိုင်းပြည်ကို မတည် မငြိမ်ဖြစ်အောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှု (Justice) မရှိပါဟု မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများက တစိုက်မတ်မတ် ပြောနေ ကြခြင်းသည်လည်း အထက်ပါ အိမ်ရှင် အိမ်ငှားဥပဒေ၊ ၁၉၈၂ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဥပဒေနှင့် မျိုးချစ် ဥပဒေ တို့ကို ဖတ်ရှု ကြည့်ပြီး ပြောဆိုနေ ကြခြင်းဖြစ်၏။
၆။ စီရင်ချက်ချရန် အိတ်ပိတ်စာ ဖွင့်ဖတ်ပေး ရသော တရားစီရင်ရေး ရပ်ဝန်း။
လက်ရှိ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်၏ သရုပ်သကန်ကို ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး သတ်မှုတွင် တရားရှင် လွှတ်ပေးလိုက်သည်ကို ကြည့်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူ သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။
ဒုတိယ အချက်ထောက်ပြချင်တာက အင်ဒင်းရွာ လူ အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်မှုကို ဖေါ်ထုတ်သည့် သတင်း ထောက်များအား နိုင်ငံတော် လျှို့ ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုဖြင့် တရားစွဲ ထောင်ချသော အခါ လူ အစု လိုက် အပြုံလိုက် ကို နိုင်ငံတော်က လျှို့ဝှက်စွာ သတ်သည့် အဓိပ္ပါယ် ထွက်စေ၏၊
ဦးကိုနီ အမှု ရုံးချိန်းတွင် တရားရေး ဌာနကို ထမင်းဝအောင် စားခိုင်းသူများလည်း အရေးယူခြင်း မခံကြရ။
တရားစီရင်ရေးကို အစိုးရက စွက်ဖက်သည့် ရလဒ်က တရားရေး မဏ္ဍိုင်ကို ပြည်သူတို့ ယုံကြည်မှု မရှိကြတော့ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ နိုင်ငံတစ်ခုကို အုပ်ချုပ်ရာတွင် အသက်သွေးကြောဖြစ်သော (Justice) တရား မျတမှုကို တရားရေးဌာနက စောင့်ထိန်းထားသင့်သည်။
၇။ ဘာသာတရား၏ ပြဌာန်းချက်များကို မလေးစားသာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာ၏။
ပရွက်ဆ်ိတ်တစ်ကောင်တောင် သတ်ခွင့် မရှိသော ဘာသာတစ်ခု၏ ခေါင်းဆောင်က လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူတို့အား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား ပြောကြားသလို လူ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကို စား စရာ၊ နေစရာ မရှိအောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟူ၍လည်း ကြုံးဝါးလိုက်သောအခါ လက်ခုပ် သြဘာ ပေးသူများ အလွန် ပေါများသည်ကို အံ့သြဘွယ်ရာ တွေ့ရ၏။
ဘာသာတရား၏ တားမြစ်ချက်၊ ဥပဒေတို့၏ ကန့်သတ်ချက်တို့ကို ကျော်လွန်၍ အမုန်းတရား ဟော ကြားသော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တို့ကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့တွင် ဘာသာခြား မဝင်ရ ဆိုင်းဘုတ်များ ပလူပျံ အောင် ထောင်လာကြ၏။
ဘာသာ သာသနာ ဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့် ဆိုင်သော ရာဇသတ်ကြီး အခန်း (၁၅) ပါ ပုဒ်မ ၂၉၅၊ ၂၉၅ (က)၊ ၂၉၆၊ ၂၉၇၊ ၂၉၈ တို့သည် လူများစု ကိုးကွယ်သော သာသာကြီးကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်သာ အသက် ဝင်ပြီး လူ နည်းစု ကိုးကွယ်သော ဘာသာ သာသနာကို ဖျက်ဆီးသူ၊ ဆော်ကားသူများ အတွက် စာအုပ်ထဲမှာ သာ ရှိသော ဥပဒေတို့ ဖြစ်ကုန်၏။
အမိန့်ရ အမုန်းတရား လွတ်လပ်စွာ ပွားခွင့် ရခြင်း၏ ရလဒ်မှာ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု များကို တားဆီးသော ပြည်တွင်း မငြိမသက်မှု များကို ဖြစ်ပေါ်စေ၏။ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲတွင်း နက်စေ၏။
၈။ ဆွံ့အ နားမကြားသည့် အပြင် မျက်စေ့ပါ ကန်းသောခေါင်းဆောင်တို့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း။
တခါက မျက်စေ့ တဖက် လပ်နေသော ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦးသည် စစ်ပွဲကို ရပ်တန့်ရန် နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်က ထောင်ပြသော အချက်ပြ အလံကို မမြင်ဟန် ဆောင်ပြီး စစ်ပွဲကို ဆက်တိုက်၏။ ထုခြေလွှာ တင်ရသော အခါ လပ်နေသော မျက်စေ့ ဘက်မှ အလံပြ၍ မမြင်ပါဟုဆိုသောကြောင့် American Idiom တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာ၏။ Authorities were turningablind eye to the human rights. ဟူ၏။
နားကောင်းသော၊ မျက်စေ့ နှစ်ဖက်လုံးမြင်သော မြန်မာခေါင်းဆောင်တို့သည်လည်း တိုင်းပြည်တွင်း ဖြစ်ပျက်နေသော မတရား မှုများကို မကြားဟန်၊ မမြင်ဟန် ဆောင်ကုန်ကြ၏။ မတရားမှု ပြုသူနှင့် ခံရသူ အကြား၊ ကြားနေ ဝါဒ ကျင့်သုံးသူပါ ဟူ၍လည်း ဆင်ခြေ ပေးသော ခေါင်းဆောင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာ ပြည်ကြီးတွင် ရှိ၏။ မတရား ပြုမှုကို မသိ ကျိုးကျွန် ပြုသူသည် ကျူးလွန်သူ ကို အားပေး၊ အားမြှောက် ပြုရာ ရောက်၏။
ကမ္ဘာသိ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို မတားမြစ်ဘဲ နူတ်ဆိပ်ကာ ကြားနေခဲ့သည့် နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးသည် နောက်ဆုံးတွင် ထိုအပြစ် အတွက် ယခုထက် တန်ဖိုးကြီးကြီး ပိုမို ပေးဆပ်ရန် ရှိသေး၏။ နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးတွင် ကန့်ကွက်မဲ ပေးမည့် နိုင်ငံတို့က တိုင်းပြည် အတွင်းရှိ လုပ်ပိုင်ခွင့် တို့ကို မျှော်လင့်ကုန်၏။ ဗီတို အာဏာ ပိုင်သော နိုင်ငံ ကြီးကမူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတ တို့ကို မျက်စောင်း ထိုးလေ၏။
၉။ ထို့ကြောင့် ဤရပ်ဝန်းတွင် ဖြစ်ထွန်း အားသန်နေသော အနှုတ် လက္ခဏာများ။
(က) ဆွံ့အ နားမကြား သည့်အပြင် မျက်စေ့ အမြင်ပါ မှုံဝါးနေသော ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်နေ၏။
(ခ) နိုင်ငံရေး ကျပ် မပြည့်သော မျိုးချစ်များ ရှိ၏။
(ဂ) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ စံများနှင့် မယဉ်ပါးသော ဥပဒေ ပညာရှင် အများစု ရှိ၏။
(ဃ) မဲဆွယ်စဉ်က ဘာသာ လူမျိုး မခွဲခြား သော်လည်း လွှတ်တော် အတွင်း ရောက်သောအခါ
လူမျိုးတူ ဘာသာတူ သူ များကိုသာ ကိုယ်စားပြုသော လွှတ်တော် အမတ်မင်းများလည်း ရှိ၏။
(င) ဥပဒေက မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမှု အထက်က ပေးပို့ထားသော အမိန့်စာကို စီရင်ချက် အဖြစ်
ဖတ်ပြသည့် တရားသူကြီးများ လည်းရှိ၏။ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍတွင် အဂတိ လိုက်စားမှုက တော့
ဆိုဖွယ် မရှိ။ အစဉ် အလာ၊ ရိုးရာ ဓလေ့ ဖြစ်လျှက် ရှိ၏။
(စ) တရားခံကို မြင်လျှက် ဖမ်း၍ မမိသော ရဲများ လည်းရှိ၏၊ ရာဇသတ်ကြီး စာအုပ် အခန်း (၁၅) ပါ
ပုဒ်မ တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထိပါးဆော်ကားသူများကိုသာ ကပ်သော ပုဒ်မတို့ ဖြစ်ကုန်၏။
(ဆ) ဖွဲ့စည်းပုံက အပ်နှင်းထားသော အာဏာကို အပြည့် အဝ အသုံး မချတတ်သော ရုပ်သေး သမ္မတ
(ဇ) ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မသိ၍ မလိုက်နာသော၊ ထို့ထက်မက ချိုးဖေါက်သော အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်
(ဈ) သတ်ခြင်း ဖြတ်ခြင်းနှင့် လုခြင်း ယက်ခြင်း တို့သည် မဆန်း ဆိုသည့် သူများလည်း အမျိုးသား
နိုင်ငံရေးတွင် တွင်ကျယ်စွာ ပါဝင်နေကြ၏။
(ည) အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ကို စောင့်ကြည့် တည့်မတ်ရန် အားကောင်းသည့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့
အစည်းနှင့် မီဒီယာများလည်း မရှိပါ။
၁၀။ မြန်မာပြည်ကြီး အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲသွားအောင် လုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ထိုရပ်ဝန်းများကို
အကယ်၍ အသင်သည် ထိုသို့သော အဖက်ဖက်က ယိုယွင်းနေသော ရပ်ဝန်းများကို မပြုပြင်ဘဲ မြန်မာ နိုင်ငံသည် နောင် အနှစ် ၂၀ အကြာတွင် စင်္ကာပူကို ကျော်တက်မည်ဟု ပြောအံ့၊ ထို အပြောသည် နိုင်ငံ တကာ ခေါင်းဆောင်များ အကြား အပျင်းပြေ ဟာသ တစ်ခုထက် ပိုမည်ဟု မထင်။
ဤစာရှုသူ အနေဖြင့် မေ့မေ့ ဆန္ဒများ အမှန်တကယ် ပြည့်ဝစေချင်လျင် ဖေါ်ပြပါ ရပ်ဝန်းများ ကောင်း မွန်လာအောင် မေမေ တစ်ဦးတည်းကိုသာ အားကိုး မနေဘဲ။ နှုတ်၏ စောင်မခြင်း၊ လက်၏ စောင်မခြင်းများ အပြင် အရပ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်းနှင့် မီဒီယာများ ဒီ့ထက် ပိုမို အားကောင်း လာအောင် ကိုယ်တိုင် ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Tags: MgTamardi, Opinions